သင့်ငွေတောင်းခံပါ ကျောင်းသား၏ဘဏ္Financialာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ» Hodges University
Hodges တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားဘဏ္Servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုဌာနသည်သင့်အားငွေကြေးအထောက်အပံ့၊ ကျောင်းသားများ၏အကောင့်များနှင့်ဖတ်စာအုပ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုကူညီရန်အထူးပြုအထူးကျွမ်းကျင်သူများကိုကမ်းလှမ်းထားသည်။
အဆိုပါ မစ်ရှင် ကျောင်းသားဘဏ္Financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုရုံး၏ရုံးခွဲသည်ကျောင်းသားများ၏ဘဏ္financialာရေးအောင်မြင်မှုအပေါ်အမြင့်ဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ရန်ပုံငွေများပေးရာတွင်တန်းတူအခွင့်အလမ်းများပေးနေစဉ်အတွင်းကျောင်းသား၏ဘဏ္financialာရေးအောင်မြင်မှုကိုအာရုံစိုက်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျသောဘဏ္informationာရေးသတင်းအချက်အလက်နှင့်တစ် ဦး ချင်းလမ်းညွှန်မှုနှင့်ကျောင်းသားများနှင့်မိသားစုများအားအဖွဲ့လိုက်ပူးပေါင်းခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းတို့ဖြင့်ပံ့ပိုးပေးခြင်းအားဖြင့်လက်လှမ်းမီမှုနှင့်တတ်နိုင်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုတိုးမြှင့်သည်။
အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီဖက်ဒရယ် / ပုဂ္ဂလိကကျောင်းသားချေးငွေများ၊ ဖက်ဒရယ် / ပြည်နယ်ထောက်ပံ့ငွေများ၊ FAFSA နှင့် FA အတည်ပြုခြင်းကဲ့သို့သော
ဖုန်း - (239) 938-7758
ဖက်စ် - (239) 938-7889
အီးမေးလ် - finaid@hodges.edu
နှင့်ပတ်သက်။ သတင်းအချက်အလက်များသည် ကျောင်းသားအကောင့်များ ကျူရှင် / အခကြေးငွေစရိတ်များ၊ ငွေပေးချေခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းအစီအစဉ်များ၊ တတိယပါတီငွေတောင်းခံခြင်း၊ ပြန်အမ်းငွေများ၊ ၁၀၉၈-T ပုံစံများစသည်တို့ပါဝင်သည်။
ဖုန်း - (239) 938-7760
အီးမေးလ် - sas@hodges.edu
နှင့်အတူအကူအညီတောင်းသည် ဖတ်စာအုပ်ဖြေရှင်းချက်, ဥပမာ - သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ (ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊ e-book, access Code)၊ အရင်းအမြစ်များနှင့်အမှာစာအတည်ပြုခြင်း။
ဖုန်း - (239) 938-7770
အီးမေးလ် - universitystore@hodges.edu
Hodges တက္ကသိုလ်အရင်းအမြစ်ကြေး FAQs.
အွန်လိုင်း - ငွေပေးချေမှုကို credit card (MasterCard, VISA, Discover) မှသော်လည်းကောင်းအီလက်ထရောနစ်စစ်ဆေးမှုဖြင့်သော်လည်းကောင်းပြုလုပ်နိုင်သည် myHUgo.
စာပို့ - ငွေပေးချေမှုကိုကျောင်းသားဘဏ္Financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုရုံး၊ 4501 Colonial Blvd. သို့စစ်ဆေးနိုင်သည်။ Fort Myers, FL 33966. ကျေးဇူးပြု၍ ချက်လက်မှတ်တွင်သင့်ကျောင်းသား၏ ID နံပါတ်ထည့်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ငွေသားပေးချေမှုကိုမပို့ပါနှင့် (ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ငွေသားဖြင့်ငွေပေးချေခြင်းကိုလက်ခံပါသည်)
ဖုန်းနံပါတ် - ခရက်ဒစ်ကဒ် (MasterCard, VISA သို့မဟုတ် Discover) သို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်ချက်ငွေပေးချေမှုကို (၂၃၉) ၉၃၈-၇၇၆၀ သို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
လူ - Naples သို့မဟုတ် Fort Myers ကျောင်းရှိကျောင်းသားများ၏ဘဏ္Financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုဌာနသို့သွားခြင်းဖြင့်ခရက်ဒစ်ကဒ် (MasterCard, VISA သို့မဟုတ် Discover) ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်ငွေသားငွေသားထုတ်ယူခြင်း။
ကျောင်းလခနှင့်အခကြေးငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်များကိုလက်ရှိ Hodges တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်တွင်ကျူရှင်စရိတ်၊ ပရိုဂရမ်ကြေး / ကျူရှင်ကွဲပြားမှုများ၊ သင်တန်းကြေးများ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ကျောင်းသားဘဏ္Financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုရုံးရှိကျောင်းသားအကောင့်ကျွမ်းကျင်သူကိုဆက်သွယ်ပါ (239) 938-7760, အီးမေးလ်ပို့ပါ sas@hodges.edu, ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်များအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ Naples သို့မဟုတ် Fort Myers ကျောင်းများသို့သွားရောက်ခြင်း။
ငွေပေးချေမှုအားလုံးသည် ၄ ​​လကာလသို့မဟုတ် ၆ လသက်တမ်းအတွက် (UPOWER ™သာ) အတွက်ကန ဦး အတန်းပထမနေ့တွင်အပြည့်အဝပေးချေရမည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်တွင်ကြည့်ပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုနေပါကငွေပေးချေမှုတစ်ခုစီအတွက်နောက်ဆုံးရက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျောင်းသားအကောင့်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။ ငွေပေးချေမှုများသည်သင်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခြင်းရှိမရှိ၊ နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ရောက်မှသာဖြစ်သည်။
ငွေရေးကြေးရေးဆိုင်ရာအကူအညီများကိုလက်ခံရရှိသူများသည်ငွေပြန်အမ်းငွေမထုတ်မီသူတို့၏ငွေစာရင်းများကိုကျောင်းသားဘဏ္Servicesာရေး ၀ န်ဆောင်မှုရုံးမှပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအတည်ပြုရမည်။ အကယ်၍ ဘဏ္aidာရေးအကူအညီကိုချိန်ညှိပါကသင်ပေးသောမူလအကူအညီပမာဏပေါ် မူတည်၍ ဖက်ဒရယ်ပညာရေးဌာနသို့မဟုတ်ဖလော်ရီဒါပညာရေးဌာနသို့ပေးအပ်သောငွေပြန်အမ်းငွေအတွက်သင်ကြွေးတင်ကောင်းပေးလိမ့်မည်။
ဘဏ္aidာရေးအထောက်အပံ့အားပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည်ခရက်ဒစ်နာရီပြောင်းလဲမှု၊ ကျောင်းသား၏အထောက်အပံ့အချို့အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ကျေနပ်ဖွယ်ပညာရေးဆိုင်ရာတိုးတက်မှု (SAP) နှင့်တွေ့ဆုံရန်ပျက်ကွက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
တရားဝင်ဆုတ်ခွာသော ၁၉၉၂ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၄ အရဘဏ္assistanceာရေးအကူအညီကိုလက်ခံရရှိသောကျောင်းသားများသည် ၁၉၉၈ ခုနှစ်၏အဆင့်မြင့်ပညာရေးပြင်ဆင်ချက်များနှင့်အညီငွေပြန်အမ်းမည်။ လုံးဝဆုတ်ခွာ၏။ ရရှိသောအကူအညီပမာဏကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုတစ်ခုပေါ်တွင်တွက်ချက်သည်။
မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုကျောင်းသားသည်ကျောင်းမှထွက်ခွာနိုင်သည်။ ထုတ်ယူခြင်းပေါ်လစီတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းတက္ကသိုလ်၏တရားဝင်နှုတ်ထွက်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပြီးမြောက်ရန်တာ ၀ န်ရှိသည်။ ထို့အပြင်အွန်လိုင်းစစ်ရေးပေါ်တယ်မှတစ်ဆင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်ပါကထိုအွန်လိုင်းစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပေါ်တူဂီမှတဆင့်ဆုတ်ခွာခြင်းသည်ကျောင်းသား၏တာဝန်ဖြစ်သည်။
တက္ကသိုလ်ဆုတ်ခွာမှုမူဝါဒများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကြည့်ပါ တက္ကသိုလ်ကက်တလောက်.
သင်၏လစတင်ကာလ (၄ လကာလ) အတွက်သင်တန်းတစ်ခုစီစတင်သည်နှင့်သင်၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအရည်အချင်းပြည့်မှီမှုကိုကျောင်းအပ်မှုအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ အကဲဖြတ်လိမ့်မည်။ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအားမည်သည့်အချိန်တွင်ပေးမည်၊ ကျောင်းသား / ကျောင်းပြန်အမ်းငွေကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ရလိမ့်မည်တို့ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားတစ် ဦး ၏ကျောင်းအပ်မှုအခြေအနေသည်၎င်းတို့တက်ကြွစွာစာရင်းသွင်းထားသောခရက်ဒစ်ပေါ်အခြေခံသည်။
ကျောင်းသားများအနေဖြင့်၎င်းတို့အားလုံးသည်ပြန်အမ်းငွေကိုလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည် ကျူရှင်နှင့်အခကြေးငွေစွဲချက် အပြည့်အဝပေးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းသားတစ် ဦး ၏အကောင့်တွင်ခရက်ဒစ်မည်မျှပြုလုပ်နိုင်သည်ကိုအနည်းဆုံး ၃၂ ရက်ကျလျှင်ကျောင်းလခနှင့်အခကြေးငွေပေးဆောင်ရမည်။
ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အောက်ဖော်ပြပါစာရင်းသွင်းခြင်းအခြေအနေလမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီ တက်ကြွသောချေးငွေနာရီများအပေါ် အခြေခံ၍ အရည်အချင်းပြည့်မီမှု -
ထက်ဝက်ထက်နည်းသောအချိန်ပိုင်း အချိန်ပိုင်း ¾အချိန် အချိန်ပြည့်
တက်ကြွသောချေးငွေနာရီ 1 -56 - 89- 11 12 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို
Federal PELL Grant * ¼သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည် ½သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည် ¾သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည် အပြည့်အဝရထိုက်ခွင့်
ဖက်ဒရယ် SEOG * ခွင့်မပြုနိုင် ½သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည် ½သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည် အပြည့်အဝရထိုက်ခွင့်
ပြည်နယ် EASE ထောက်ပံ့ငွေ * ခွင့်မပြုနိုင် ခွင့်မပြုနိုင် ခွင့်မပြုနိုင် အပြည့်အဝရထိုက်ခွင့်
ပြည်နယ် FSAG * ခွင့်မပြုနိုင် ခွင့်မပြုနိုင် ခွင့်မပြုနိုင် အပြည့်အဝရထိုက်ခွင့်
ဖက်ဒရယ်ချေးငွေများ * ခွင့်မပြုနိုင် အပြည့်အဝရထိုက်ခွင့် အပြည့်အဝရထိုက်ခွင့် အပြည့်အဝရထိုက်ခွင့်
* ကျောင်းသား၏ဖက်ဒရယ် / ပြည်နယ်ဘဏ္aidာရေးအထောက်အပံ့အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မှီမှုအပေါ်မူတည်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ ငွေပြန်အမ်းခြင်းနှင့်ငွေကြေးအထောက်အပံ့ငွေပေးချေခြင်းရက်စွဲကျောင်းသား၏ကျောင်းသားပြက္ခဒိန်တွင်ကြည့်ပါ myHUgo ။
1098 - ပုံစံများ
1098-T အခွန်ပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက်အခွန်သက်သာခွင့်များ
အကယ်၍ သင်သည်အဆင့်မြင့်ပညာရေးကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးဆောင်ပါကအမေရိကန်အခွင့်အလမ်း (ယခင်မျှော်လင့်ချက်) နှင့် Lifetime Learning အခွန်ခရက်ဒစ်များကိုသင်ရနိုင်သည်။ ဤချေးငွေများကိုတောင်းခံရန်သင့်အားအထောက်အကူပြုရန် Hodges တက္ကသိုလ်သည် ၁၀၉၈-T အခွန်ပုံစံကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမတ်လ ၃၁ ရက်တွင်ပြည်တွင်းအခွန်များ ၀ န်ဆောင်မှုဌာနသို့တင်သွင်းလိမ့်မည်။
ဤအချက်အလက်သည်မည်သည့်နည်းနှင့်မျှတက္ကသိုလ်၏အခွန်အကြံဥာဏ်ကိုကိုယ်စားမပြုပါ။ ခရက်ဒစ်၏ရထိုက်ခွင့်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်မှာအခွန်ထမ်း၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ ဤခရက်ဒစ်အတွက်အခွန်အကြံဥာဏ်နှင့် ပတ်သက်၍ Hodges တက္ကသိုလ်သို့မဆက်သွယ်ပါနှင့်။ အမေရိကန်အခွင့်အလမ်းနှင့်တစ်သက်တာသင်ယူခြင်းအခွန်ဆိုင်ရာခရက်ဒစ်များအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ပါ IRS ထုတ်ဝေမှု ၉၇၀ - အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက်အခွန်သက်သာခွင့်များ သို့မဟုတ်ပြည်တွင်းအခွန်များဌာန (800) 829-1040 သို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ 1098-T အခွန်ပုံစံ၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်သက်ဆိုင်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ Hodges တက္ကသိုလ် (239) 938-7760 သို့ဆက်သွယ်ပါ။
ကျောင်းသားသို့မဟုတ် ၄ င်းတို့၏မိသားစု ၀ င်များမှမဟုတ်သည့်အဖွဲ့အစည်းသည်ကျောင်းသားတစ် ဦး ၏ပညာရေးဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးဆောင်ရန်ကတိကဝတ်ပြုသည့်အခါ ၄ င်းတို့ကို Hodges တက္ကသိုလ်မှတတိယပါတီထောက်ပံ့သူအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ကျောင်းသား၏ငွေစာရင်းမှငွေပေးချေလျှင်စပွန်ဆာကိုတက္ကသိုလ်မှငွေတောင်းခံသည်။ ဤငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတတိယပါတီမှငွေတောင်းခံခြင်းဖြစ်သည်။
စပွန်ဆာပေးသူများ၏ငွေပေးချေမှုများသည်အခြားဘဏ္financialာရေးအထောက်အပံ့နှင့်တူညီသောဖက်ဒရယ်အစီရင်ခံမှုလိုအပ်ချက်များအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အချို့သောစပွန်ဆာပေးမှုများသည်ငွေတောင်းခံလွှာကိုမလိုအပ်ပါ။ ကျောင်းသားငွေကြေးဘဏ္Servicesာရေးရုံးမှတစ်ဆင့်တက္ကသိုလ်မှစီမံခန့်ခွဲသည်။
သင်သည်ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်စေ၊ စပွန်ဆာဖြစ်စေဖြစ်စေသင်သည်တတိယပါတီငွေတောင်းခံမှုမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်ငွေပေးချေမှုများကိုမည်သို့မည်ပုံလုပ်ဆောင်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (FAQs) တွင်သင်အဖြေများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်နောက်ထပ်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျောင်းသားဘဏ္Financialာရေး ၀ န်ဆောင်မှုရုံး (239) 938-7760 သို့ဆက်သွယ်ပါ sas@hodges.edu.
ဖောက်သည်များဘဏ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်သော BankMobile သည်ကျောင်းသားများအတွက် Hodges တက္ကသိုလ်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအခြားအဆင့်မြင့်ပညာရေးဌာနများမှကျောင်းသားများ၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကိုပြန်အမ်းသည်။ BankMobile အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ဒီ link ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု.
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ Customer များ၏ဘဏ်ခွဲဖြစ်သော BankMobile နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်း၏စာချုပ်ကိုကြည့်ရှုရန်။